Zavatra 5 tokony hodinihinao alohan'ny handefasana ny tranokala ecommerce | Martech Zone
Zavatra 5 tokony hoeritreretinao alohan'ny handefasana ny tranokala ecommerce anao
Talata, Jona 8, 2021 Talata, Jona 8, 2021 Hamzah Adil
Mieritreritra ny handefa tranokala ecommerce? Ireto misy zavatra dimy tokony hodinihinao alohan'ny handefasana ny tranokala ecommerce:
1. Manana ny marina Products
Mitady ny vokatra mety ho an'ny orinasa ecommerce dia mora lazaina kokoa noho ny vita. Raha heverinao fa nanenjana ny sehatry ny mpihaino ianao dia te hivarotra, ny fanontaniana manaraka momba ny zavatra amidy. Betsaka ny zavatra tokony hojerenao rehefa manapa-kevitra momba ny vokatra iray ianao. Ianao dia mila maka antoka fa ny vokatra nofidianao hivarotra dia tinady. Fantaro fa mikasa ny hanao orinasa ianao ary hahazo vola.
Ny fitsapana vokatra na tolotra vaovao dia tsy vitan'ny hoe miasa mafy sy mandany fotoana fotsiny, fa mety ho lafo ihany koa. Raha tokony hanandrana zava-baovao ianao dia mitadiava vokatra tadiavina ary ao anaty akany tsy dia mifaninana. Ny fanaovana an'io enti-mody io dia mety ho toa raharaha be, fa kosa handoa dividends any aoriana rehefa matotra ny tranonkalanao ecommerce.
2. Manana mpamatsy sy mpandefa marobe
Raha vantany vao nahavita ny vokatra amidinao ianao dia mila mamantatra hoe avy aiza no hividianana azy. Raha tsy ataonao irery 100% ny vokatrao, raha tsy misy mpamatsy tafiditra, dia azonao atao ny miala amin'io dingana io. Ho an'ny olon-drehetra dia ity no mila tadidinao.
Ampahany manan-danja amin'ny Ny fanamboarana izao tontolo izao dia atao any Azia. Ny fandefasana loharano avy amin'ireo firenena ireo mankany amin'ny toerana hafa toa an'i Etazonia dia handany fotoana. Tsy handany fotoana fotsiny io fa ho olana koa satria kilometatra kilometatra miala ny mpamatsy anao ianao. Amin'ireto scenario ireto dia tsy maintsy jerenao ireo mpamokatra alehanao amin'ny fotoanan'ny fahoriana na tsy fahatokisana.
Raha ny tokony ho izy dia tokony hanana mpanamboatra telo ka hatramin'ny efatra ianao amin'ny vokatra tokana. Tokony hifanaraka amin'izy ireo ianao ary hampandre azy ireo raha antenainao ny fitomboan'ny varotra na zavatra hafa. Raha vantany vao mahita mpamokatra ianao dia mila manahy momba ny fandefasana ny vokatrao. Misy safidy maromaro azo atao, ary tsara kokoa ny manao ny fahazotoanao alohan'ny hanapahanao hevitra hiaraka amin'ny iray.
3. Hamafiso ny tranokalan'ny varotrao ho an'ny fanovana
Andao hiditra amin'ny lafiny mamorona kokoa amin'ny fanaovana orinasa ecommerce. Mba hahombiazan'ny orinasanao dia mila manao varotra ianao. Ny fanaovana varotra dia tsy dia sarotra loatra raha ny tranokalanao no noforonina tsy misy kilema ary miasa araka izay kasain'ny mpampiasa azy.
Manakarama mpamorona sy mpamorona izay efa nanaporofo ny traikefany tamin'ny fanaovana tranokala vokarin'ny valiny raha tsy azonao antoka ny manangana ilay tranonkala irery. Izy ireo dia afaka manome soso-kevitra fitaovana toy ny chatbots, app chat mivantana, na pop-up izay afaka manampy amin'ny fampitomboana ny varotra. Ho fanampin'izay, alao antoka fa tsy misy bibikely manan-danja ilay tranonkala fa mety hanakana ireo mety ho mpanjifanao rehefa mandefa varotra izy ireo.
4. Manambola amin'ny marketing mahomby.
Amin'izao fotoana izao dia manana ny tranokalanao ecommerce efa mandeha ianao, nefa mbola tsy mahazo vola ihany. Mba hanombohana fitateram-bola dia mila manomboka mampiasa vola amin'ny fantsom-barotra marina ianao. Misy safidy maromaro azonao isafidianana. Raha mitady ny fiverenana eo noho eo ianao dia afaka mandeha amin'ny doka media sosialy, doka amin'ny motera fikarohana, marketing influencer, raha te hitonona vitsivitsy.
Ho an'ny ankamaroan'ny olona dia tokony hanomboka amin'ireo fomba telo ireo ianao ary hahitanao izay mitondra fiovam-po ho anao. Avy eo, rehefa manomboka mahazo vola ianao ary afaka mametraka fanandramana, dia mety te hijery tetikady marketing maharitra toa ny fanatsarana ny motera fikarohana (SEO), marketing amin'ny atiny, doka sns.
5. Mametraha politika mazava aloha
manana politika mazava tena ilaina mba hiantohana ny asa ataon'ny tranonkalanao ecommerce isan'andro tsy misy sakana. Ireo politika ireo dia misy ny politika momba ny tsiambaratelon'ny tranokalanao, ny politika miverina, ny fanarahana ny HIPAA raha azonao atao, sns.
Aleo mifanerasera amin'ny olona matihanina amin'ireto raharaha ireto. Na dia tokony ho kely aza ny vintana hidiranao amin'ny olana, ataovy tsy misy izy ireo amin'ny alàlan'ny fananana politika mazava sy mazava natao hiarovana anao sy ny orinasanao.
Ho fanovozan-kevitra, azonao atao ny mamaky ny politika misy amin'ny sasany amin'ireo olona goavam-be eo amin'ny ecommerce sy mpifaninana mitarika eo amin'ny akany.
Momba ny SwiftChat
SwiftChat afaka manampy anao hamantatra ireo mpitsidika tsara kokoa amin'ny chat mivantana ary hitarika azy ireo hividy. Ny chat mivantana amin'ny ecommerce dia mety ho 400% ambany noho ny fanohanan'ny telefaona, afaka mampitombo ny fiovam-po in-3 ka hatramin'ny 5, mampihena ny tahan'ny fandaozana ny sarety, mampitombo ny fahafaham-pon'ny mpanjifa, mampitombo ny tsy fivadihan'ny mpanjifa ary manatsara ny famokarana ataon'ny mpiasa mpanohana anao.
SIgn Up For SwiftChat
Tags: hiresakafanatsarana ny tahan'ny fiovam-poCropolitika fitahirizana datachat ecommercefanombohana ecommercemarketing marketingmpandefa ecommercempamatsy ecommercefandefasanavelona amin'ny chatpolitika fiarovana fiainan'olonafifangaroan'ny vokatrafisafidianana vokatrampamatsy vokatrapolitika famerenanampandefa entana
Hamzah Adil dia mpanatanteraka marketing nomerika ao SwiftChat, rindranasa chat mivantana natao hanampiana ny ekipa mpanjifanao sy ny varotrao.